Iincwadi ongenakuphulukana nazo ukuba uyile umzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezi ziincwadi umyili wemizobo angenakuyeka ukuzithenga
Ilizwe lokufunda liphelele imilingo kwaye iyamangalisa kwaye kumaphepha nje ambalwa unokufumana uninzi lweembono kunye nolwazi oluya kukwenza ukhule kokubini ngokwengqondo nangokomoya kwaye oko kukuthi Zininzi iintlobo zeencwadi eneempawu ezahlukeneyo.
Los abayili bemifanekiso Kufuneka kwakhona bafundele iincwadi ukwandisa ubuchule bakho nolwazi malunga nendalo kunye noyilo lweelog ezahlukeneyo zeepowusta zentengiso zeenkampani.
Iincwadi ezilungileyo zabayili bemizobo
Kule nqaku siza kuncomela ezona ncwadi zilungileyo unokuzifunda ukwandisa eyakho Ulwazi nentelekelelo njengomyili wemizobo, ukuze amandla akho kunye nomsebenzi wakho ungabikho mida.
El incwadi yokuqala esiza kukubonisa yona malunga ubugcisa bemfazwe kwaye unokufumana ngokulula kwi-intanethi ukuyikhuphela nakweyiphi na yeefomathi zokufunda eziqhelekileyo. Incwadi ibhalwe nguNiccolò Machiavelli kwaye ithathwa njengenye ye Ezona ncwadi zibalaseleyo kwihlabathi. Ibali lisekwe kwisivumelwano semfazwe esidumileyo kwimbali yoluntu kunye nezicwangciso eziza kwenziwa kulo lonke eli yelenqe nawuphi na umyili wemizobo ufunde indlela yokusebenza ngaphakathi kwilizwe leshishini.
Incwadi elandelayo esiyicebisayo "Sukundenza ndicinge”, Yeyiphi ngokusisiseko Isikhokelo esifanelekileyo somyili wemizobo, apho uya kufumana ukubaluleka kunye nokukhululeka apho ungasebenzisa iindawo ezahlukeneyo zonxibelelwano. Ithathwa njengeyona ncwadi ibalulekileyo yokusetyenziswa kwi- ilayibrari yakhe nawuphi na umyili wemizobo Kwaye kuyacetyiswa kakhulu nangabaqeqeshi bamakhondo
Ukuba ufuna ukwazi kancinci malunga nekhondo lomsebenzi owukhethileyo kunye nemvelaphi yalo, incwadi "Imbali yoyilo lwegraphicNgaba yile nto uyikhangelayo. Le ncwadi yenye yeencwadi zokuqala ezintlanu ezenziwa yiYunivesithi yaseLondon malunga nomsebenzi wokuyila umzobo ofundiswa apho njengomsebenzi.
Kule nto Incwadi uya kuba nakho ukufumana yonke into enxulumene nemvelaphi yoyilo lwegraphic, kunye nayo yonke into enxulumene nabantu ababalaseleyo kuyo kunye nemvelaphi yezinto ezithile ezifanelekileyo kwikhondo lomsebenzi. Ukwazi imbali yabayili bemizobo kubaluleke kakhulu kuba iyakuvumela njengengcali ukuba uzazi ukuba ungubani Kungenxa yokuba yonke into oyenzayo kwikhondo lomsebenzi wakho yenziwa ngaloo ndlela kunye nokudala amanyathelo amatsha kunye neenkqubo, ukongeza kwinto yokuba uya kuba nakho ukunqanda inani elikhulu leempazamo ezenziwe ngaphambili.
Incwadi nayo inokukhutshelwa kwi-intanethi nangayiphi na indlela Kwaye enye incwadi ongayeki ukuyifunda ibizwa ngokuba "Uyilo lwegraphic, ezisisiseko kunye nezenzo", Incwadi yoyilo lwegraphic ebalulekileyo kuyo nayiphi na ingcali kunye nomfundi Ikhondo lomsebenzi osebenza kwimithombo yeendaba ezimanyelwayo, ezishicilelweyo kunye nezidijithali.
Uya kufumana izinto ezinje uyila njani umxholo kunye nezinye iingcebiso ezibalulekileyo kunye nezinto ezisisiseko ekufuneka umzobi ayithathele ingqalelo ukuze aqhubele phambili kwaye afezekise bonke ubuchule ngokufanelekileyo ebomini babo bonke njengomyili.
Incwadi "uyilo lwegraphic kunye nentengiso " Isiseko seBhayibhile sayo yonke into emele uyilo lwegraphic kuba ngeli xesha lomsebenzi hayi kuphela kubalulekile ukuba wazi ukuba ungazenza njani iikhonsepthi ezintsha kunye nemibono kunokuba, kuya kufuneka uyazi ukuba ujongana njani nentengiso. Umntu oziva ukuba ndiyatya umyili wemizobo Unetalente, kodwa akazi ukuba angabhengeza njani.Kufuneka akhethe omnye umsebenzi kuba uyilo lwegraphic lujolise ekwenzeni intengiso yemidiya.
Incwadi yokugqibela esiza kukucebisa yona yincwadi ka "izimvo malunga noyilo lwegraphic ". Le ncwadi yile kucetyiswa ngokubanzi Kungenxa yokuba kulula kakhulu ukuyifunda kwaye intshayelelo ecacileyo kuzo zonke iziseko zoyilo lwegraphic ekufuneka umyili azithathele ingqalelo kwaye afunde ngaphambi kokuba abe yingcali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezi ziincwadi umyili wemizobo angenakuyeka ukuzithenga
Musa ukubeka ababhali, kukho amawaka eencwadi anegama "uyilo lwegraphic kunye nentengiso." Ngaba unokucacisa ngakumbi?
Ubugcisa beMfazwe obubhalwe nguMacavavelli ?? Umama owakuzalayo.
Kundinika ukuba uve iintsimbi kodwa awazi ukuba zivela kwi-bell tower okanye sisandi seselfowuni.
Uxolo. Ewe uMachiavelli unobugcisa beMfazwe
Ndifunda le yothetha nge-sun tzu kodwa ndayiqaphela ukuba iphindaphindeka kakhulu, andazi, mhlawumbi bekufanele ukuba ndiqhubeke ndiyifunda kodwa yandidika.
Umdibanisi woMyili, inguquko kwicandelo loyilo